endless: တစ်ခု မှ မရဘူး...အားလုံး အင်တွေ ပဲ..........တိတိကျကျ သိချင်တယ် ကူညီကြပါ အုံး..............
ကျွန်တော့်ဘလောဂ်ကိုလာဖတ်ဖို့ လာကြည့်ဖို့ ကျွန်တော် ကြော်လဲမကြော်ငြာပါ .. တိုက်လဲမတိုက်တွန်းပါ .. ဆွဲလဲမဆွဲဆောင်ပါဘူး .. အဲ့ဒီ့အတွက် လိုအပ်ရင် အချိန်မရွေးလာကြည့်လာယူနိုင်ပါတယ် ... ကျွန်တော်ကတော့ လာဖို့လဲ မတိုက်တွန်းသလို .. မလာနဲ့လို့လဲ မတားပါဘူး .. ဒါပေမယ့် လိုအပ်ရင်တော့ လာနိုင်ပါတယ် . မေးနိုင်ပါတယ် .. အခုကျွန်တော်တင်ပေးထားတာတွေဟာ ဘာတစ်ခုမှ မကောင်းတာတွေကို တင်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး .. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သုံးပြီး၊ ဒေါင်းလော့လုပ်ပြီးမှသာလျှင် သေချာမှ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ ရေးပြီးတင်ပေးတာပါ .. အချိန်မရွေးစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ် .. အဲ့ဒီ့တော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို မတိုက်ပါနဲ့ .. တိုက်ရင်လဲ ကျွန်တော်က သိပ်ပြီး ဂရုစိုက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး .... ကိုယ်ကျင့်တရားကို တန်ဖိုးထားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ .. ဘာမဟုတ်တဲ့ဆိုက်ကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ .. ခြုံကွယ်ကနေ မပြောပါနဲ့ .. သတ္တိရှိတယ်ဆိုရင် .. အီးမေးလ်လိပ်စာ (သို့) ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ ချန်ထားပေးခဲ့ပါ .. ကျွန်တော်နှင့် အွန်လိုင်းပါ ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါသည် .. ကျွန်တော်ကပဲ မဟုတ်တာတွေရေးပြီးတင်နေတာလား .. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ မသိနားမလည်ပဲ မသုံးတတ်တာလားဆိုတာကို ခွဲခြားသိသွားအောင် ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်မှားရင် သင်ပြဆုံးမပြီး ထောက်ပြပေးဖို့ အချိန်မရွေး လက်ကမ်းကြိုပါတယ် .. ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာလောကထဲကိုရောက်နေတာ (7)နှစ်ကျော်သွားပါပြီ ... မနက်မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ် ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတာပါ .. မနေ့တစ်နေ့ကမှ ကွန်ပျူတာနားကိုရောက်ပြီး စကားကြီးစကားကျယ်နဲ့ လူအထင်ကြီးအောင် လျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး .. သတ္တိရှိရင် အချိန်မရွေး အွန်လိုင်းမှာ ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် .. ခြုံကွယ်ကနေ ချောင်းပြီးမတိုက်ပါနဲ့ .. လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီပါဘူး ..
အောက်မယ် ip လိပ်စာ တစ်ခုတည်းနဲ့ သုံးတဲ့လိပ်စာတူကိုပါ ရေးပေးလိုက်ပါတယ် .. အောက်မှာရေးပြပေးလိုက်တဲ့သူများထဲမှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေပါသလို .. ကျွန်တော်ဘလောဂ်စရေးကတည်းက ခင်မင်တဲ့သူတွေလဲပါပါတယ် .. ထည့်ပေးလိုက်တာကတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများ ဘယ်ဆိုင်မှာသုံးတယ်ဆိုတာကို သိအောင်လို့ရေးပေးလိုက်တာပါ .. သူတို့ကို ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူး ..
အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။သိတာတောင်နောက်ကျနေပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဟာသတွေအရမ်းကြိုက်တယ်။
14 Jun 09 20:23
09 Jun 09 15:00
ဒီမှာနေသေးလား မသိဘူး။ ရောက်ခဲ့တယ်
07 Jun 09 15:17
your website is very good. Try your attention. good luck
05 Jun 09 23:30
03 Jun 09 17:40
မှတ်ချက် ။ ။ အခုရေးပြလိုက်တာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေလဲပါပါတယ် .. သူတို့ ဘယ်ဆိုင်မှာသုံးတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး .. အပေါ်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေတော့သိမယ်ထင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်ဘယ်ဆိုက်လဲဆိုတာကို သိချင်လို့ရေးပေးလိုက်တာပါ ..
Posted by ညီနေမင်း at 10:34 PM
Angel Shaper June 20, 2009 at 1:53 AM
အကိုရေ အဲလိုကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
လူတိုင်းကစေတနာနဲ့ တန်ပေမယ့် အဲလိုပါပဲ တချို့ က စိတ်သဘောထား သေးသိမ်တာပါ။
ဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့နော်။ အကို့ ကိုကျေးဇူးတွေတင်နေတာ။ တကယ်ပြောတာပါ။ တတ်တဲ့ပညာကို သူငယ်ချင်းတွေ ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်ဆိုတာ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ပါ။ တို့ တွေအားလုံးကို အကူအညီပေးနေပါတယ်။ အကို ဒီ့ထက်ပို အောင်မြင်ပါစေ။
mgmg June 20, 2009 at 5:47 AM
အကိုရေ အကို့လိုပညာပေးတဲ့တက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို စော်ကားတယ်ဆိုတာ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး ကျွန်တော်တို့လို ဘာမှမတက်သေးတဲ့လူတွေကို အသေးစိတ်လေးရှင်းပြထားတာ တကယ်ကျေးဇူပါအကို
စင်ပေါ်ကလူက ခွေးကိုက်မှာ မကြောက်ရပါဘူးအကိုရာ
ပျော်ရွှင်ပါစေ စထက်တိုးလို့ပေါ့ ပညာဒါနပြုနိုင်ပါစေ